Ataovy ao anatin'ny fifandraisanareo ny fonao | Martech Zone
Talata, Janoary 1, 2013 Douglas Karr
Ny fandraharahana dia mifandraika amin'ny fifandraisana. Fifandraisana amin'ny mpanjifanao, ny vinavinanao, ny mpivarotra anao ary ny orinasanao manokana. Sarotra ny fifandraisana. Mampidi-doza ny fifandraisana. Ny fametrahana ny fonao any ivelany dia mety hahafoana azy. Tokony apetrakao ao am-ponao ny fonao raha irinao ny hahombiazan'izy ireo.
Betsaka ny antony mahatonga ny fifandraisana tsy mahomby. Indraindray misy tsy mety fotsiny. Ny ankamaroan'ny fotoana dia tsy mahomby satria raisina ho toy ny fanary… izay tsy manome lanja ny fifandraisan'ny antoko tsirairay avy. Misy mihevitra fa 50/50 ny fifandraisana. Raha manao ny anjaranao ianao dia hataoko ny ahy. Fifandraisana iray izay ataon'ny roa tonta fotsiny ny antsasaky ny zavatra ataony afaka ny fanaovana dia tsy fifandraisana mihitsy. Tsy mametraka ny fonao ao anatiny izany.
Tsy hahomby ny fifandraisana raha tsy mametraka 100% isika. Ny fananganana fifandraisana mahomby dia mitaky anao hirotsaka tanteraka. Ampidiro 100% satria tianao ny zavatra ataonao, ary tianao ny manompo ny ankilany. Izay kely indrindra dia hitarika amin'ny tsy fahombiazana.
Ity taona ity no taona ilainao hamerenana mandinika ny fifandraisanao sy mametraka azy ireo ny fonao. Taona tokony hanome 100% ny fanomezana torohevitra amin'ny alàlan'ny bilaoginao. Ity dia taona hanomezana 100% ny mpanjifanao na manao ahoana na manao ahoana ny vola aloany, rehefa mandoa izy ireo, na mankasitraka ny zavatra ataonao. Ny fametrahana ny fonao ao anatiny dia hahatanteraka ny zavatra ilainao fa tsy ny azy ireo fotsiny.
Ny Fitsipika volamena dia milaza ny hitondra ny hafa ho ianao maniry ny hotsaboina. Nisy nilaza tamiko fa misy ny Fitsipika Platinum… ary izany dia ny fitondrana ny hafa ho toy ny izy ireo maniry ny hotsaboina. Fotoana izao hitsaboana ny prospect, ny mpanjifa ary ny mpivarotra izy ireo maniry ny hotsaboina. Ampidiro ao ny fonao.
Ny fandrefesana dia zava-dehibe hahitana izay mandeha, inona no tadiavin'ny vinavinanao sy ny mpanjifanao ary hampihatra tsara ireo loharano anananao. Mbola mila apetrakao ao am-ponao anefa ny fampandehanana azy io. Mbola mila mametraka 100% amin'ireo fifandraisana ireo ianao raha manantena ny hahombiazan'izy ireo.
Ity taona ity no taona anaovanao ny fonao.
Flint: Fanodinana fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny fakantsary
6 Jan 2013 amin'ny 11:28 PM
Ny fitiavana no lakilen'ny fifandraisana mahomby. Amin'ny raharaham-barotra dia zava-dehibe ny hametrahanao ny fonao amin'izay ataonao. Manangana fifandraisana tsara amin'ireo mpanjifanao, mpiara-miasa aminao ary amin'ny orinasanao hahomby.
Misaotra Sir Douglas.
Jan 7, 2013 ao amin'ny 10: 45 AM
Misaotra Douglas. Eritreritra tsara handehanako ny atidohako (sy ny foko) anio maraina. Lalao fifandraisana eo amin'ny orinasa sy eo amin'ny fiainana hatrany izany. Manaiky tanteraka aho. Ny tsara indrindra vitako ho anao amin'ny taona vaovao!